Imali ayikuphela kwento edingwa ngosomabhizini abamnyama abasafufusa kuhulumeni, kuloba uNtokozo Biyela - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
Izindlela eziningi uhulumeni azama ukusiza ngazo osomabhizinisi abamnyama abasafufusa ngiye ngizifanise nokuthela amanzi ebhakedeni elinezimbobo eziningi. Amanzi ngiwafanise nemali eningi uhulumeni athi uyayitshala kula mabhizinisi noma izisombululo eziningi aqhamuka nazo ngethemba lokuthi bazokhula osomabhizinisi abamnyama abasafufusa. Konke nje kuvele kufane nokuthela amanzi emhlane wedada.
Zimbalwa izinkinga esibhekene nazo siyiNingizimu Afrika. Okokuqala, iningi labantu elenza lezi zinhlelo ezisabalele izwe lonke ezinhlanganweni eziningi ezisiza amabhizinisi abantu, ikakhulukazi abangenalo ulwazi oluphelele ngokwenzeka emabhizinisini, aphethwe abantu abamnyama.
Okwesibili, iningi labo yilona kanye eliyinkinga, elivimbe intuthuko yamabhizinisi abantu abamnyama okufanele liwasize ukuthi athuthuke. Okwesithathu, iningi labo abantu elazi ezamabhizinisi ngenxa yemfundo ngezamabhizinisi alikaze lidayise ngisho uswidi wodwa lona.
Lolu hlobo lwabantu luyinkinga kakhulu uma kukhulunywa ngokuthuthukiswa kwamabhizinisi asafufusa abantu abamnyama ngoba isikhathi esiningi yile nhlobo engazi nanyaka ngezinkinga ezibhekene nalaba osomabhizinisi. Okuningi bakubuka ngeso lencwadi nemfundo yasenyuvesi. Kanti kukhona nolunye uhlobo olungazi lutho. Bazithola sebefakwe kulezi zinhlangano noma lezi zikhundla ngokwenzelela ngenxa mhlawumbe yenhlangano abahambisana nayo kodwa uma kuziwa ekuqondeni ibhizinisi kumnyama ebusweni benkawu.
Manje-ke ungathemba kanjani ukuthi ikhona intuthuko esile esiyoyibona siyisizwe ngokuthuthukiswa kosomabhizinisi abamnyama?
Okunye, osomabhizinisi abamnyama abazizamela impilo ngokuzama ukufukula amabhizinisi noma ngenxa yentshisekelo abanayo sebezithola bebangisana nosopolitiki nezihlobo zosopolitiki abalandela ibhodwe eliconsayo. Yonke imali uhulumeni athi uyibekele ukusiza ukufukula osomabhizinisi abamnyama igcina isiphelela emindenini ethile embalwa ngenxa yokuthi omunye kuyona unesikhundla esiphezulu kumbe kuhulumeni, emkhandlwini noma kulezi zinhlangano okumele zisize abantu bakithi.
Akusizi ukuthi uhulumeni eloku efaka amanzi (imali) ebhakedeni elinezimbobo ngoba ngeke ligcwale lelo bhakede. Imali akuyona isisombululo sayo yonke into ebhizinisini. Abantu bakithi abamnyama abaningi badinga ukufundiseka nokuhlengwa kwezamabhizinisi. Le nto ifana ncamashi nokuthengela umuntu ongenazo izincwadi zokushayela imoto njengesipho. Empeleni umfaka engozini. Kufanele afunde izimpawu zasemgwaqweni kuqala, afunde ngemoto, aphinde afunde nangemithetho elawula abashayeli.
Uhulumeni kufanele manje ashintshe izindlela zokuxhasa osomabhizinisi abancane ngemali kuphela. Ezinye izinsiza zingafana nokuthi uhulumeni akhe izindawo zokusebenzela zokukhiqiza noma amahhovisi okusebenzela komasipala abaningi bese enikeza osomabhizinisi lezo zindawo mahhala. Noma enzele osomabhizinisi ama-voucher abangawasebenzisa ukuqasha bese yena uhulumeni noma umnyango oqondene namabhizinisi, kube yiwona “abambisa” ngawo uma umuntu eseyitholile indawo yokusebenza. Kungaba yisabelo sonyaka noma emibili noma emithathu uhulumeni ekhokhela osomabhizinisi abasafufusa indawo yokuqasha.
Noma uhulumeni athengele osomabhizinisi abasafufusa izinsiza ezifaka nama-computer, ama-laptop, ama-tablet, ama-smartphone, i-wifi ne-airtime njalo ngenyanga kuze kuphele unyaka. Lezi yizinsiza ezibaluleke kakhulu kulesi sikhathi esiphila kusona. Ibhizinisi elingenazo lezi zinto lisenkingeni.
Okokugcina onke amabhizinisi asafufusa kufanele kube yimpoqo ukuthi angene ohlelweni lokuqeqeshwa oluthize ngaphambi kokuthi ahlomule ngemali yokufukula ibhizinisi. Onke lawo mabhizinisi bese ethola ozowacathulisa ewaluleka ukuze angazitholi esefadalala ekuhambeni kwesikhathi.